Waa Maxay Farqiga U Dhexeeya Kylian Lionel Messi Iyo Mbappe? Tababare Didier Deschamps Ayaa Sharaxaad Ka Bixiyay. - GOOL24.NET
Waa Maxay Farqiga U Dhexeeya Kylian Lionel Messi Iyo Mbappe? Tababare Didier Deschamps Ayaa Sharaxaad Ka Bixiyay.
Tabababaraha xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa sharaxaad ka bixiyay farqiga u dhexeeya da’yarka xulkiisa ee Kylian Mbappe iyo kabtanka xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi isaga oo tilmaamay hal arin oo muhiim ah oo u dhexaysa labadan xidig.
Didier Deschamps ayaa sheegay in farqiga u dhexeeya Messi iyo Mbappe uu yahay in da’yarka xulkiisu uu awooday in uu France ku hogaamiyay ku guulaysiga koobka aduunka kaas oo aanu Messi ilaa hadda awoodin in uu Argentina u qaado koob aduun.
Didier Deschamps ayaa ku dooday in farqi badani u dhexeeyo Messi iyo Mbappe laakiin waxa uu ku dooday in Kylian Mbappe uu aduunyada ka baxsan yahay isaga oo heer kale gaadhi doono laakiin waxa uu qiray in heer layaableh uu Messi ku soo jiray muddo toban sanadood ah.
Didier Deschamps oo waraysi siiyay La Gazzetta dello Sport ayaa isaga oo ka hadlaya farqiga u dhexeeya Messi iyo Mbappe waxa uu yidhi: ” Messi iyo Mbappe waa laba ciyaartoy oo kala duwan oo leh dabeecado kala duwan, laakiin hal shaw ayaa cadaan ah, Kylian aduunyadan wuu ka baxsan yahay”.
Laakiin Didier Deschamps oo isbarbar dhigaya Messi iyo Mbappe ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in ay kuwada jiraan heerka ciyaartoy oo isku mid ah, laakiin Kylian aad ayuu da’yar yahay, anigu ma doonayo in aan wax ka qaado Kylian laakiin Messi toban sanadood ayuu heer layaableh ku soo jiray”.
Didier Deschamps oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Kylian waxa uu fursad wayn u haystaa in uu sidoo kale qaato waayo ciyaareed oo wayn, haddaba wax fiican ayuu samaynayaa inkasta oo ay kuwo kale hortiiba awoodeen ku guulaysiga koobka aduunka, waxa uu haystaa dariiq dheer oo uu sidoo kale horumar ku samayn karo”.
Lionel Messi iyo Kylian Mbappe ayaa ka mid ah 30-ka musharax ee u tartamaya abaal marinta Ballon d’Or ee ay France football bixin doonto iyada oo ay sidoo kale ka mid yihiin xidigaha ugu cad cad ee abaal marintan ku guulaysan kara.